Otu esi etinye ihe nchọgharị Brave na Linux Mint 20 - LinuxCapable
September 25, 2021 September 19, 2021 by Jọshụa James
Bubata ebe nchekwa Brave
Otu esi agba ọsọ Brave Browser
Na-emelite ihe nchọgharị Brave
Wepụ ihe nchọgharị Brave
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Brave Browser na Linux Mint 20.
Kwado ụdị ahụ wee wuo ụdị Brave Browser arụnyere na sistemụ arụmọrụ gị site na iji iwu a:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ogwe ọrụ > Ngwa > Ịntanetị > Ihe nchọgharị nwere obi ike. Ọ bụrụ na ịgaghị achọta ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi ebubata ebe nchekwa Brave n'ime ndepụta isi mmalite ma tinye ihe nchọgharị weebụ. N'ozuzu, Brave bụ onye ọhụrụ na-akpali mmasị na ebe ihe nchọgharị weebụ. A ga-ekwere nkwudo Brave banyere ịdị ngwa karịa Google Chrome dịka site na iwepu mgbasa ozi na ndị na-eso ụzọ mgbasa ozi na ndabara, Brave na-ebudata ọdịnaya dị obere na weebụsaịtị karịa ihe nchọgharị ọ bụla ọzọ.
Categories Mint Linux Tags Nchọgharị Obi Ike, Mint 20 Mint Linux Mail igodo
Otu esi etinye nchara na AlmaLinux 8
Echiche 5 na "Otu esi etinye ihe nchọgharị Brave na Linux Mint 20"
November 5, 2021 na 10: 41 am
Nke a bụ ntụzịaka nzọụkwụ site na nzọụkwụ magburu onwe ya!
Ihe niile na-arụ ọrụ naanị a kwuru, ọ dị mma.
Echere m na Brave dịkwa ngwa ngwa ka Opera na-adịbu.
Dịka onye bịara ọhụrụ na CLI na Linux ọ ga-amasị m ịnweta nhọrọ ịhụ nkọwa nke ihe iwu pụtara, dị ka curl na &&. Aghọtara m na nke a abụghị nkuzi CLI, enwere m ike lelee ndị ahụ n'onwe m.
Enweghị ike ikele gị nke ọma maka ime nke a dị mfe yana iwepụta oge iji tinye nke a ọnụ, nseta ihuenyo na-agbakwụnye ọtụtụ ihe. Ezigbo ọrụ.
November 5, 2021 na 7: 27 pm
Daalụ maka ozi ahụ, m ga-agbalị ma tinye ntakịrị ozi n'ọdịnihu.
M ga-agbalị na-eme a nkọwa nkọwa, ụdị nke akpaaka njikọ na ihe dị ka curl definition n'ọdịnihu, dị nnọọ na-ewe obere oge na saịtị m dị nanị ọnwa 3 🙂 ọ ga-eme ... n'ikpeazụ 🙂
Mana daalụ maka nzaghachi ahụ, enwere m ekele maka ya ma enwere m obi ụtọ na ị na-enwe obi ụtọ. Naanị cheta ka ị na-emelite ya dịka ị ga-eji ihe nchọgharị ọ bụla nyere ego nke 0-ụbọchị irigbu nke yiri ka ọ na-ada kwa izu na-emetụta ihe nchọgharị ịntanetị niile n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
November 27, 2021 na 7: 53 pm
Ndewo, a na m eso nzọụkwụ ọ bụla. Brave na-arụ ọrụ. Ma akara ngosi egosighi n'etiti ngwa (ọbụlagodi na-eji nhọrọ ọchụchọ). Yabụ na enwere m ike iji naanị ahịrị iwu. Kedu ka esi agbalite akara ngosi?
November 27, 2021 na 7: 58 pm
hi, mgbe atọ malitegharịa akara ngosi ya mechara pụta.
November 27, 2021 na 8: 13 pm
Malitegharịa ugboro atọ?
A na-achọkarị otu dabere na otu esi etinye ya site na ndị njikwa nrụnye ndị ọzọ dị ka snap, flatpak. N'agbanyeghị nke ahụ, anụtụbeghị m banyere nke a tupu iji ebe nchekwa APT na ihe nchọgharị ịntanetị ọ bụla.
Daalụ maka ịkpọ ya. Enwere m ike ime nyocha iji hụ ma ndị ọzọ nwere nke a ma tinye ụfọdụ ndetu. Onwe m ahụbeghị ya n'onwe m, mana enwere m ekele maka ị kwuru ya.